Maalinta: 17-ka July, 2018
Wakaaladda TCDD-da ee Shaqaalaha Ajaaniibta Horumarinta
Waxaa jiray horumar kaas oo ka farxiya shaqaalaha qandaraas-hoosaadka ee TCDD. Waraaq ay u dirtay Agaasimayaasha Guud ee Gobolka Tareenka Waddooyinka (TCDD), macluumaadka shaqaalaha ee ku saabsan qoritaanka shaqaalaha qandaraas hoosaadka ayaa la codsaday. Shaqaalaha qandaraaslaha ee TCDD [More ...]
Waddooyinka Gaadiidka Dadweynaha ee Cusub ee Degmooyinka Bismil District
Dowlada Hoose ee Magaalada Diyarbakır waxay soo bandhigaysaa gaadiid dadweyne oo cusub oo daboolaya xaafada 9 miyiga ee udhaxeysa bartamaha magaalada iyo degmada Bismil si loo siiyo muwaadiniinta galaangalka xarumaha magaalada ee isbitaalkooda, waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo baahidooda ganacsi. [More ...]
Saldhigga Degmada New District waa mid aad u wanaagsan oo loogu talagalay Çameli
Dhismooyinka Terminalka casriga ah ee ay Denizli Magaalo-weynaha Magaaladu u fidiso degmooyinka ayaa ku yimaada mid mid. Çamelililer wuxuu sheegay in Saldhigga Baska ee Degmada Çameli, oo loo adeegsaday heerkan, uu aad ugu habboon yahay degmada iyo Degmada Denizli ee Maal-gashiga maalgashiga la sameeyey. [More ...]
42 Evler waa qadka cusub
Ka sokow kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka suufiyada, Degmada Kocaeli Magaalo-Weyne waxay dumineysaa xad-gudubyadii hore waxayna magaalada ka dhigaysaa mid casri ah iyadoo sameysa kuwa cusub. Wajahadan dhexdeeda, khadka tareenka ee degmada Izmit 42 Evler [More ...]
IETT on Democracy Watch Watch 15 Axaddii
Shaqaalaha IETT waxay qabteen dimoqraadiyad horteed degmada Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) oo ku taal Saraçhane taasoo qayb ka ah 15 Luulyo dhaqdhaqaaqyada dimuqraadiyadda iyo Maalinta Midnimada Qaranka. Isku daygii khiyaanada ee FETÖ intii lagu gudajiray muwaadiniinta 14 ee shahiiday [More ...]
15 wuxuu ku jiray Demoqraadiyadda Dallaawaha bishii July
Sannad-guuradii labaad ee isku daygii afgambiga khiyaanada ah ee 15 July, kumanaan muwaaddiniinteena ah ayaa si raaxo leh oo nabad ah ugu biiri kara Marmaray iyo Başkentray si ay uga qeybgalaan barnaamijyada xuska ee lagu abaabulay N15 July ee Dimuqraadiyadda iyo Maalinta Midnimada Qaranka ee Temmuz. [More ...]
Iyadoo baaritaanka shil tareenka oo lagu dilay 24, Wasiirka cusub ee gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule wuxuu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan wado tareen cusub oo udhaxeysa. Khadkii hore [More ...]
Sarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddiga Cankesen C TCDD Dhamaan annaga Ulaşma
Can Cankesen, Madaxweynaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen, waa xubin ka mid ah websaydhka rasmiga ah ee shaqada ku saabsan dhimashada 24 iyo dhaawaca tareenka 318 ee ka dhacay agagaarka degmada Çorlu ee Tekirdağ. [More ...]
Shahaadada Aqoonsiga ee dadka tuulada ah ee geerida shil tareenka
Dawlada hoose ee Tekirdag, 8 waxay dhacday bishii Luulyo iyo muwaadin 24 ah oo ku dhintey shilka tareenka raadinta iyo howlaha badbaadinta dabeecadda xasaasiga ah iyo abaabulka dhammaan fursadaha dadka deggan xaafadaha Sarılar. [More ...]
Madaxweynaha Turkiga Association Disabled Sukru Boyraz 8 ayaa war-saxaafadeed ku saabsan shilka tareenka ka dhacay meel u dhow Corlu July 2018 sameeyey. Shil tareen oo ka dhacay agagaarka Çorlu Axaddii la soo dhaafay [More ...]
Gacan-siinta Gaadiidka Badbaadinta ee Muwaadiniinta ee Manisa
Dowlada hoose ee Manisa, oo muwaadiniinta kula kulanta wadooyin raaxo leh iyadoo dib u cusbooneysiineysa wadooyinka dayaca oo xaalad xun ku jirta, waxay shaqo dayactir ka bilaabeen wadada giraan-ga ee hore ee Terminalka Baska. Tirtir dariiqyada qallafsan ee ka jira wadadaas oo mas'uul ka ah wadooyinka waaweyn [More ...]
TCDD Gaadiidka KPSS 2018 / 1 Daabacaadda Ballanta
Gaadiidka TCDD ayaa ku dhawaaqay magacaabida shaqaalaha. Ogeysiiska lagu daabacay mareegtada rasmiga ah ee hay'adda, KPSS 2018 / 1 macluumaadka dhexe waxaa lasiiyay murashaxiinta loo qoondeeyay shaqaalaha shirkadda inta ay le'egtahay meelaynta. Magacaabista musharixiinta dejinta xarunta [More ...]
Baaskiilada 300 ee loo qaybiyay dadka dhalinyarada ah ee ku yaalla magaalada Gaziantep
Baaskiiladaha 300 waxaa loo qeybiyay ardayda marka loo eego baaxada leh ee dhacdada baaskiilka ee labaad oo loo habeeyey sannadkan iyadoo lala kaashanayo Dawladda Hoose ee Gaziantep iyo Golaha Dhallinyarada Magaalada Gaziantep. Munaasabad ka dhacday hoolka Mutlu Cafe ee Masal Park [More ...]